Isitudiyo esisha sha enkabeni ye-Goreme
Ifulethi elisha le-50m2 lamatshe langasese elisenkabeni ye-Göreme. Indawo yokungena yangasese ehlukene, igumbi lokulala elinombhede wenkosi, igumbi lokugezela langasese, ikhishi elinamathiselwe nendawo yokuhlala ene-flat screen TV, i-WiFi kanye nesiphephetha-moya.
Ifulethi le-Studio akukaze kube okumangalisayo!
Le ndlu entsha yesitudiyo samatshe itholakala enkabeni ye-Goreme futhi izoba yikhaya elihle kude nasekhaya.
Ukuhlanganisa izakhi zemvelo: izinkuni & itshe. Inamafasitela amaningi, akha indlu yesitudiyo evulekile yomqondo ekhanyayo.
⭐︎ Umbhede olingana nenkosi onemicamelo yekhwalithi ephezulu, iduvet namalineni
⭐︎ Igumbi lokugezela le-en-suite eligcwele elinamanzi ashisayo nekhanda leshawa elinengcindezi ephezulu
⭐︎ Ikhishi elinosinki, ifriji, ihhavini ye-microwave, igedlela likagesi, umenzi wekhofi, i-toaster, itop cooktop, izitsha zokupheka kanye ne-dinnerware
⭐︎ I-Premium hardwood flooring
⭐︎ Ukushisa okuphakathi
⭐︎ I-air conditioning
⭐︎ Isethi ye-TV yesikrini esiyisicaba esinamashaneli aphesheya
⭐︎ Itafula lokudlela nezihlalo
⭐︎ Amathawula kakotini wekhwalithi (ithawula lokugeza, ithawula lesandla nethawula laphansi)
⭐︎ Indawo yokupaka yamahhala emagcekeni
⭐︎ Ukungena/ukuphuma okuguquguqukayo
Azikho izindawo zokuwasha endlini kodwa uma udinga ukuthi kube khona ozokuhlanzela ngesikhathi ulapha lokhu kungahlelwa ngezindleko ezengeziwe.
Engeza uhlu lwami ohlwini lwakho lwezifiso ngokuchofoza ♠️ ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Isitudiyo sitholakala enkabeni yeGoreme, imizuzu emi-2 kuphela uhamba uye esiteshini samabhasi. Iseduze nezitolo, izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela nezitolo zekhofi.
Izungezwe izigodi noshimula abaningi bezinganekwane, i-Goreme iyinhliziyo yeKaphadosiya mayelana nezindawo ongazivakashela. Nakuba ibizwa ngokuthi ‘iGoreme’ njengesiqalekiso, ukube nje wonke umuntu ubengaya eKhaphadosiya futhi abone leli zwe elihle kangaka!
Izimangaliso zemvelo zihlangana nezimfihlakalo zomlando kule ndawo, Goreme. Iphakathi kwezindawo ze-Unesco World Heritage, enombono wayo oyingqayizivele, umkhathi ongaqondakali kanye nezinto zobuciko zomlando, ethi 'ungafi ungangibonanga' Amabhaluni ahlobisa isibhakabhaka ekuseni kanye noshimula bezinganekwane bakhanyiswa kusihlwa njengefilimu. isimo sihlala phezulu ohlwini 'okungalibaleki eKhaphadosiya'.
I-Goreme Open Air Museum iqhele ngamakhilomitha angu-1.6, enye yezindawo eziphezulu ongazibona e-Goreme kanye ne-UNESCO World Heritage kusukela ngo-1985.
Ngilapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala, kodwa izinga lethu lokusebenzisana likuwe. Ngishayelwa ucingo/umlayezo kuphela. Ngizokunikeza izeluleko ezinhle kakhulu futhi ngizokusiza ukuthi uhlele izinkambo nemisebenzi ngamanani angcono kakhulu kanye nezinkampani ezihlonishwa kakhulu: izindiza zebhaluni lomoya oshisayo, i-jeep safari, izinkambo zomlando, izinkambo zangasese, izifundo zokupheka...
Ngilapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala, kodwa izinga lethu lokusebenzisana likuwe. Ngishayelwa ucingo/umlayezo kuphela. Ngizokunikeza izeluleko ezinhle kakhulu futhi ngizokusiza…